2018 – Year – Burmese Subtitle
The Witch: Part 1. The Subversion ၂၀၁၈ ထွက် ကိုရီးယား Mystery, Triller ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ IMDB Rating 7.1 ထိရရှိထားတဲ့ The Witch:Part 1 The Subversion ပါတဲ့။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကလေးဆုံးရှုံးထားတဲ့ လင်မယားက ခေါ်ယူမွေးစားလိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း အတိတ်မေ့နေတဲ့အတွက် အရင်က အကြောင်းတွေမမှတ်မိပါဘူး။ ကောင်မလေး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက် ဆုကြေးငွေ အများကြီးရနိုင်တဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုပြရာမှာ အများအံ့အားသင့်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ အကြောင်းကိုလူတွေသိသွားပြီး အတိတ်က အရိပ်ဆိုးက ပြန်လိုက်လာတဲ့အခါမှာ…. Review Credit to CM
IMDB: 7.1/10 4,225 votes
I Want to Eat Your Pancreas အထက်တန်းကျောင်းသူလေးဖစ်တဲ့ ပန်းကရိယရောဂါခံစားနေရတဲ့ Sakuraဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် သူမရဲ့ရောဂါခံစားရကတည်းကသူ့ဘဝစာမျက်နှာအဖြစ် ဒိုင်ယာရီလေးတစ်အုပ်ကို သူရေးခဲ့တယ် တစ်နေ့မှာတော့ ဆေးရုံတစ်ခုမှာ သူမစာအုပ်လေး ပြုတ်ကျရာကနေ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့စာအုပ်ကိုကောက်ရပြီး မတော်တဆဖတ်မိသွားတယ် စာအုပ်ကောက်ရတဲ့သူက Haruki ဆိုတဲ့ အတန်းဖော် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်(စာအုပ်တွေစိတ်၀င်စားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့)သူငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းသိပ်မရှိပဲခပ်အေးအေးနေတဲ့harukiဘ၀လေးsakuraနဲ့‌တွေ့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရရှိပြီးSakuraလေးကိုစိုးရိမ်တတ်လာတယ် အဲ့သလိုနဲ့ Sakura ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိသွားတဲ့ Haruki ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကဘာလဲ Sakura က သူ့လျှို့ဝှက်ချက်haruki‌အ‌ေပါ်ပေါက်ကြားသွားတဲ့အခါ ပုံမှန်ဘဝလေးကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ Haruki နဲ့တူတူ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားလဲဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်... ချန်ခဲ့တဲ့သူထက်ကျန်ခဲ့သူကဘလောက်ထိလွမ်းရမလဲပေါ့? နောက်ဆုံးHarukiပို့ခဲ့တဲ့messageလေးတစ်စောင်ကရောက်သွားခဲ့တဲ့အထိပေါ့......[I want to eat your pancreas💬] အားလုံးသိ့ပြီးတဲ့ကားလေးဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ် Animeစိတ်၀င်စားတဲ့သူတွေအဖီးတလိုင်းတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ #Crd MH ဒီ Anime ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Burmese Subtitles နဲ့ Summer Anime Best Friend [SABF] တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်
IMDB: 7.9/10 4,141 votes
Fifty Shades Freed (2018) Fifty Shades Freed ရဲ့ preview ကိုတော့ စာအုပ်ထဲဇာတ်လမ်းနဲ့Trailer ကိုဆက်စပ်ပြီးဖော်ပြပေးပါမယ်။ Trailer ဟာ Christian နဲ့ Ana မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့ဖွင့်ထားပြီး Grey တို့ဇနီးမောင်နှံ ဥရောပတခွင် ဟန်နီးမွန်းထွက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဟန်းနီးမွန်းမှာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် နောက်ကြောင်းမအေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Christian ရဲ့ ရုံးအဆောက်အဦးမှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုမီးဟာ မတော်တဆကြောင့်လောင်ကျွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း Christian သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Ana ရဲ့အကူအညီနဲ့ တရားခံဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို Christian တစ်ယောက်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ ဟန်းနီးမွန်းကပြန်ရောက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲပြန်ဝင်ကြရတဲ့အခါ Ana ဟာ Acting Fiction Editor မဟုတ်တော့ပဲ Fiction Editor ဖြစ်နေပါပြီ။ Christian Grey ရဲ့ အရှိန်အဝါကြောင့် ပစားပေးခြင်းခံရတာကို မလိုလားတဲ့ Ana ဟာ SIP ရုံးတွင်းမှာ ...
IMDB: 4.5/10 49,943 votes
Life of the Party (2018) Life of the Party (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး Spy ဆိုတဲ့ ဟာာသကားကို ကြည့်ဖူးရင် ဒီဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီး Melissa ကိုသိကြမှာပါ။ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ပိုင်နိုင်လွန်းလို့ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားကြည့်ရုံနဲ့သူ့ကိုမှတ်မိနေမှာပါ။ အခုဇာတ်ကားကလည်း ဟာသကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ ဒီယာနာဆိုတဲ့ ကလေးအမေတစ်ယောက် နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရရင်တော့ ဒီယာနာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ၂၆ နှစ်ကြာအိမ်ထောင်သက်တန်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူက ရုတ်တရက်ကြီး သူ့ကိုကွာရှင်းဖို့ တောင်းဆိုလာပါတယ်။ မမျှော်လင့်ထားတာတွေ ရုတ်တရက်ဖြစ်လာပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို တခုလတ်ဖြစ်သွားတဲ့ ဒီယာနာဟာ သူမရဲ့ မိဘအိမ်ကို ပြန်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန် သူ့သမီးဖြစ်တဲ့ မယ်ဒီက တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ် ကောလိပ်ကျောင်းသူဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီယာနာက ကျောင်းမပြီးခဲ့ပါဘူး။ သူတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာ သူ့သမီးလေးကို မွေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငွေစုရမှာမို့လို့ ကျောင်းကနေထွက်ခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ပဲ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ သူ့သမီးကပဲ သူ့အတွက်ဘဝတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။ သူ့သမီးလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်တော့မှ ယောက်ျားစွန့်ပစ်တာခံရပြီး မိဘအိမ်ကို ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့။ အရင်က ယောက်ျားကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့တဲ့အတွက် ယောက်ျားကစွန့်ပစ်သွားတဲ့အချိန် သူ့ရဲ့ဘဝမှာ သူ့အတွက်ဘာဆိုဘာမှ မကျန်တော့တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ပညာရေးတန်းလမ်း ကလေးထိန်းပြီးအိမ်ထောင်ထိန်းခဲ့တဲ့အတွက် အလုပ်အကိုင်မရှိတဲ့ အခြေအနေထိကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ ...
IMDB: 5.6/10 29,771 votes
Solo: A Star Wars Story (2018) Solo: A Star Wars Story (2018) Plot Star Wars ရုပ္ရွင္ေတြထဲက နာမည္ေက်ာ္ Smuggler ႀကီး Han Solo ရဲ႕ငယ္စဥ္ကပါ။ Empire ရဲ႕ ၾကမ္းတမ္းလွတဲ႔ အုပ္စိုးမႈေအာက္ ကိုယ့္အိပ္မက္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ ရုန္းကန္ရပံုေတြ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ Review Solo ရုပ္ရွင္ဟာ A Star Wars Story ဆိုတဲ႔ နာမည္နဲ႔ လိုက္ခဲ႔တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တျခား Star Wars ရုပ္ရွင္ေတြမွာဆို တစ္ခါလာလည္း Skywalker မိသားစု၊ Dark Side vs Light Side, Sith vs Jedi, Rebel vs Empire/First Order စတာေတြပဲဲ ျမင္ၾကရမွာပါ။ Spinoff တစ္ကားျဖစ္တဲ႔ Rogue One ေတာင္မွ plot ပိုင္းမွာ ဒီဇာတ္လမ္းေတြထဲက သိပ္ကြဲမထြက္ခဲ႔ဘဲ ...
White Fang (2018) အခုတစ်ခေါက်ကတော့ ကလေးရော လူကြီးပါ ကြိုက်နှစ်သက်စေမယ့် ကာတွန်းကားလေးကို ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် White Fang လို့ခေါ်တဲ့ မြေခွေးလေး တစ်ကောင်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကတော့….. White Fang က တခြား သားကောင်တွေလိုမဟုတ်ပဲ အရမ်းကို လိမ္မာပြီး ထက်မြက်တဲ့ မြေခွေးလေးပါ သူ့သခင်က သူ့ရွာအတွက် ငွေလိုလို့ မြေခွေးလေးကို လူတစ်ယောက်ဆီမှာ ရောင်းစားခဲ့ပါတယ် ငွေမျက်နှာတခုပဲ ကြည့်တဲ့ စမတ်ဆိုတဲ့လူဆီမှာ white fang က နှိပ်စက်ခံရပြီး လောင်းကစားပွဲတွေမှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် အရာရှိလင်မယားတွေ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အခါမှာ White Fang ဘဝလေး ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ? လူတွေရဲ့ လောဘ မောဘနဲ့ကင်းရာ သူ့နေရပ်ကို ပြန်ရောက်မလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် Animationကားလေးက ပေါတောတောနဲ့ ပြီးသွားမယ့်ကားမဟုတ်လို့ ကလေးရော လူကြီးပါ ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်……… Review & Translate by Panda
IMDB: 6.9/10 2,542 votes
Creed II (2018) Rating 7.6 အထိရရှိထားတဲ့ အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားလို့တောင် ပြောချင်ပါတယ်… ၁၉၇၆ခုနှစ်​ကတည်​းက စတင်​ခဲ့တဲ့ မင်​းသားကြီး စတားလုံးရဲ့Rocky ဆိုတဲ့ လက်​ဝှေ့ကားတွေဟာ ဆယ်​စုနှစ်​များစွာကြာညောင်​းခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်​ထိ အောင်​မြင်​စွာရှင်​သန်​နေဆဲပါ ပရိသတ်​တွေရဲ့ တစ်​ခဲနက်​အားပေးမှုကြောင်​့ ဇာတ်​ကားတိုင်​းဟာလည်​း rating မြင်​့မားလှပါတယ်​ ၂၀၁၅မှာ creed ဆိုပြီး ရော့ကီရဲ့တပည်​့ကို မိတ်​ဆက်​ပေးခဲ့ပါတယ်​ အဲဒီဇာတ်​ကားလေးကလည်​း ဆုတံဆိပ်​များစွာနဲ့အတူ ပရိသတ်​တွေရဲ့သဘောကျနှစ်​ခြိုက်​မှုကို ထိန်​းသိမ်​းထားနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​ ၂၀၁၈ခုနှစ်​မှာတော့ Creed2ကို ပရိတ်​သတ်​တွေဆီ ပို့ဆောင်​ပေးခဲ့ပြန်​ပါတယ်​ အရင်​ကားတွေအတိုင်​းပါပဲ စွဲဆောင်​မှုရှိရှိနဲ့ ပရိသတ်​ကို ဖမ်​းစားခဲ့ပြန်​ပါတယ်​ ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ်​ချန်​ပီယံတစ်​ယောက်​ရဲ့ရွှေခါးပတ်​ကို ရရှိဖို့ဆိုတာ မလွယ်​ကူသလို ထိန်​းသိမ်​းဖို့ဆိုတာလည်​း သိပ်​ကိုခက်​ခဲပါတယ်​ ဒီဇာတ်​ကားထဲမှာ ချန်​ပီယံဘွဲ့ကို ထိန်​းသိမ်​းရတဲ့ လက်​ဝှေ့သမားတစ်​ယောက်​ရဲ့ဘဝကို ကိုယ်​ချင်​းစာမိသွားအောင်​ ရိုက်​ပြထားပါတယ်​ ဝါသနာကြောင်​့ လုပ်​နေပေမယ်​့ နာကျင်​မှုကို လူတိုင်​း ကြောက်​ပါတယ် ​ ဒါ့အပြင်​ အချိန်​မရွေး ကြိုးဝိုင်​းထဲမှာ အသက်​ဆုံးရှုံးသွားနိုင်​ပါသေးတယ် ​ လက်​ဝှေ့ရဲ့သဘောတရားကိုက သူတစ်​ပါးကိုနာကျင်​အောင်​လုပ်​ရတာပါ သူတစ်​ပါးကို နာကျင်​စေချင်​ရင်​တော့ ကိုယ်​ကိုတိုင်​လည်​းနာကျင်​မှုကို ကြောက်​နေလို့မဖြစ်​ပါဘူး နာကျင်​မှုကို ပိုပြီးခံနိုင်​ရည်​ရှိတဲ့သူက ရေရှည်​မှာ ပိုပြီးအနိုင်​ရဖို့များပါတယ်​ အောင်​မြင်​မှုရဲ့ အရသာဟာ နာကျင်​မှုတွေကို စက္ကန်​့ပိုင်​းအတွင်​းပျောက်​အောင်​ကုစားနိုင်​တယ်​ဆိုတဲ့ ရသကိုအပြည်​့အဝပေးစွမ်​းနိုင်​တဲ့ ဇာတ်​ကားကောင်​းတစ်​ကားဖြစ်​လို့ ကြည်​့လို့ကောင်​းမယ်​ဆိုတာ ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်​… Review Credit to CM
IMDB: 7.1/10 92,092 votes